Home Wararka Farmaajo oo codsaday in uu ku biiro shirka Garowe & Saciid Deni...
Farmaajo oo codsaday in uu ku biiro shirka Garowe & Saciid Deni oo Muqdisho ku soo wajahan
Sida ay noo xaqiijiyeen mas’uuliyiin ku dhaw-dhaw madaxtooyada Soomaaliya iyo tan Puntland, Madaxweyne Farmaajo ayaa 24 saacadood ee u danbeeysay waxa uu da’daal ugu jiray in uu ka qayb-galo kulanka gaarka ah ee uga socda magalaada Garowe labada madaxweyne ee Puntland iyo Jubbaland.
Farmaajo ayaa waxa uu khadka Taleefanka kula xiriiray salaadiinta reer Puntland isaga oo si gaar ah uga codsaday in ay dhex-dhexaadiyaan isaga iyo madaxda labada Dowlad Goboleed ee Jubbaland iyo Puntland. Salaadiinta ayaana saacadihii ugu danbeeyay ku mashquulsanaa in lagu qanciyo madaxweyne Saciid Deni in uu ogolaado imaanshaha Farmaajo ee magalaada Garowe.
Sidoo kale waxa MOL loo xaqiijiyay in Madaxweyne Farmaajo uu habeenkii xalay ahaa uu qadka teleefanka kula hadlay Madaxweyne Saciid Deni isaga oo ka codsadanayo in uu ku soo biiro shirka Garowe. Laakiin Saciid Deni ayaa ka codsaday in Madaxweyne Farmaajo uu marka hore ka war-sugo go’aanada ka soo bixi kara shirka gaarka ee u socda labada dowlad Goboled.
Beesha Caalamka oo ay hogaanka u hayso dowlada Maraykanka ayaa uga digtay Farmaajo in uu baarlamaanka horgeeyo go’aanadii ka soo baxay shirka Dhuusamareeb 3 iyada oo aan marka hore laga helin ogolaasho labada Dowlad Goboleed ee Jubbaland iyo Puntland.
MW Saciid Deni ayaa dhankiisa waxa laga yabaa in uu beesha caalamka ka codsado in shirka loo dhan yahay ee lafliyo in uu dhawaan la qabto, lagu qabto magalaada Muqdisho, Garoonka Adan Cade ama Xarunta Xalane kaas oo ay goobjoog ka ahaan doonaan beesha Caalamka.
Codsigaan oo laga yaabo in beesha caalamka taageerto ayaa waxa uu karaamo daro ku ridi doonaa Farmaajo iyo dowladiisa madaama dad ajaaniib ah ay goobjoog ka noqon donaan shirka loo dhan yahay iyada oo aan waxba laga soo qaadin shirkii Dhuusamareeb 3, sidaas darteed Farmaajo waxa uu ku da’daalayaa in uu soo qanciyo labada Madaxweyne ee Saciid Deni iyo Axmad Madoobe in aan la go’aamin shirka loo dhan yahay.
Previous articleHow Somalia Was Made ‘Great Again’
Next articleDFS oo war kasoo saartay duqeyn laga fuliyay lala beegsaday argagaxisada
Qarax Lala Eegtay Ciidamo Ka Tirsan AMISOM Iyo Khasaaro Ka Dhashay